Tsoko yechina: chikamu chekutanga cheiyo 4MK Inonakidza nhevedzano | Zvazvino Zvinyorwa
JD Barker akatorwa
Tsoko Yechina — Tsoko Yechina muChirungu - ndiyo yechipiri novel nemunyori weAmerica JD Barker. Rakadhindwa munaJune 2017, ndicho chikamu chekutanga cheiyo 4MK Thrillers akateedzana, ayo akagamuchirwa kwazvo neruzhinji nevatsoropodzi. Zvakare, iro gore bhuku rakatambira maApple E-Book mibairo muchikamu che "Kunaka muIndependent Publishing" uye Audie yeakanakisa kufungidzira kufadza.
Panguva iyoyo, Barker anga atove kuzivikanwa semugadziri wematsotsi, anotyisa uye nesainzi ngano nyaya nekuda vakasiya (2014), bhuku rake rekutanga. Saizvozvo, firimu neterevhizheni kodzero dze Tsoko yechina dzakatengeswa rinenge gore bhuku risati raburitswa kuParamount Mifananidzo uye CBS, maererano.
1 Pfupiso yeThe Fourth Monkey
1.2 Iyo psycho
1.3 Munhu akabatwa
2.1 Yakasarudzika uye yekutanga
3.1 Hudiki, kuyaruka uye zvidzidzo
3.3 Kutanga semunyori
3.4 Mabhuku ekutsaurira
4 Zvinyorwa zvaJD Barker
4.1 Pfupi nyaya
4.2.1 Mumvuri Cove Saga
4.2.2 4MK Inonakidza Series
4.2.3 Novels dzakabatana naJames Patterson
4.2.4 Mamwe mabhuku
Pfupiso ye Tsoko yechina
Musoro webhuku unonongedzera kuchimiro cheChinese chetsika dzetsoko nhatu dzakangwara: usaone chakaipa, usanzwa chakaipa, usaite chakaipa. Nechikonzero ichi, kubva papeji rekutanga kuteedzana kwezviitiko zvinotarisirwa, kuitiswa kune mutinhimira weanorwara zvechokwadi, chisimba uye pfungwa dzekugadzira. Mune ino poindi mubvunzo wakakosha ndewani kana chii chinonzi tsoko yechina?
Kune serial mhondi uyu unongova mutambo wakagadzirirwa kuratidza kugona kwake kwepfungwa. Chirahwe chakagadzirirwa mapurisa chete chinopera nemukana wekununura anotevera nyajambwa.. Asi, kubva pakutanga mhondi inotanga nhanho imwe pamberi pevaya vaimutambudza ... Kunyange hazvo atofa, panogona kunge paine mumwe akabatwa.
Yechina Tsoko (orancora & ...
Kwemakore mashanu, mhondi yekupedzisira yakanzi "The Fourth Monkey" nevagari veChicago yavhundutsira vagari vayo. Kana mutumbi wake ukawanikwa, mapurisa anokurumidza kuziva mamiriro anodzvanyirira. Sezviri pachena, tsotsi raiedza kuvatumira meseji yekupedzisira: kune mumwe munhu angave achiri mupenyu.
Nekudaro, mutikitivha Sam mutakuri -Mutungamiriri we4MK yakakosha task squad- intuit izvo, kunyangwe akafa, Zvirongwa zvekuuraya zvemhondi zviri kure nekuguma. Kunzwa uku kunosimbiswa mushure mekuwanikwa kwetaari mune imwe yehomwe dzejackopath's jacket.
Paunenge uchiverenga mitsara inokatyamadza yakanyorwa nemonkey yechina, Porter anonzwisisa kuti akatovharirwa zvisina tariro mukati mehurongwa hwekupenga. Pamusoro pezvo, mamiriro ekuora kwemuviri anoita kuti zvinyanye kuziva kuzivikanwa kwemhondi, nekudaro, zvinonyanya kuomarara kuwana kwayakakuvara. Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuipa, mapurisa ane nguva shoma yekuchengetedza dhamu.
Yakasarudzika uye yekutanga
Iyo rondedzero tambo ye Tsoko yechina inomutsa manzwiro anogadzirwa neakakura echinyakare ekunyumwira kwazvino (senge Kunyarara kwemakwayana o Nomwe, Semuyenzaniso). Zvakadaro, kuvandudzwa kwebhuku kwakanyanya kwepakutanga. Kutanga, hapana chinhu chakadai semutikitivha chaiwo mukutsvaga mhondi, sezvo yekupedzisira yapfuura kare.
Saizvozvo, nhoroondo inosanganisira zvese zvakakosha zvezvinhu zve yakanaka inonakidza: mitambo yemafungiro akaomarara, mukadzi wechidiki ari munjodzi inofa, kusagadzikana kusingaperi uye zano rakakomba rinokanganisa. Uyezve, diary yemhondi inoratidza shanduko chaiyo kubva pahudiki hwakajairika kusvikira akura akanyatso kumonyoroka.
Zvakawanda zvemari yepasi yekubhadhara yakawanikwa naJD Barker mu Tsoko yechina zvinobva mukukanganisa kwetsananguro dzavo. Saizvozvo, eschatological ruzivo rwakajairika mune nyaya, saka, Haisi kuverenga kwakakurudzirwa kune ese marudzi evanhu. Mhedzisiro yanga iri yakasimba, yerima uye inovhiringidza nyaya yevaverengi vanoziva.
Naizvozvo Chimiro cheBarker chekutaurisa chinopa zvikuru uye zvinonakidza mafirimu emitambo yevanonakidza mafeni. Nezvikonzero izvi, ruzhinji rwekushoropodzwa kwemanyoro rwakayera Tsoko yechina sebhuku rine simba, rinonakidza uye rinodhakwa.
Hudiki, kuyaruka uye zvidzidzo
Jonathan Dylan Barker akaberekwa muna Ndira 7, 1971 muLombard, Illinois, United States. Akagara hupenyu hwake hwese pahudiki mumba make kusvika muna 1985 akatamira nemhuri yake kuEnglewood, Florida. Ikoko, akawana degree rake rechikoro chepamusoro kubva kuLemon Bay High Chikoro (1989). Gare gare, akanyoresa kuArt Institute yeFort Lauderdale kudzidza bhizinesi manejimendi.
Barker basa neruoko rwaPaul Gallota mumagazini Yechi25 Parallel panguva yake semudzidzi wepayunivhesiti. Mumagazini iyoyo aive newaaishanda naye padyo naBrian Hugh Warner (uyo akazozivikanwa pasi rose pasi pezita re Marilyn Mason). Pakati pemabasa ake akakurumbira kubvunzurudzwa nemapoka akaita seSeventeen kana TeenBeat.
Uye 1992, Barker akatanga kuratidza mhedzisiro yekuferefeta kwake kwakanangana nezviitiko zvakajairika mu Zvakaziviswa, chikamu chiduku chepepanhau. Mukufanana, akatora nhanho dzake dzekutanga se chiputira chipoko (ghostwriter) apo achibatsira vamwe vanyori vari kubuda nemabhuku avo.
Pa webhusaiti yepamutemo yemunyori weIllinois, zvinoita sekudaro Stephen King akamupa mvumo yekushandisa hunhu hwaLeland Gaunt (yenoveli Zvinodiwa Zvinhu) mushure mekuverenga chidimbu che chinyorwa chekutanga che vakasiya. Pamusoro pezvo, bhuku rekutanga raBarker rakava rimwe revatengesi veAmazon zvakanyanya uye rakasarudzirwa mibairo yakawanda kubva kunepasi kutsikisa.
Kunze kwaMambo, Barker ataura Neil Gaiman, Dean Koontz naJohn Saul pakati pezvinyorwa zvake zvekunyora.. Parizvino, munyori wekuAmerica uyu ndomumwe wevakakurumbira munyika yake mukati memhando dzezvakavanzika, zvinotyisa, fungidziro yesainzi uye nyaya dzakajairika. Zvirokwazvo, izvi ndizvo zvimiro zvinokudziridzwa nemunyori kubva pazera diki uye zvinoshandiswa muzvinyorwa zvake.
Panyaya iyi, chinyorwa chinotevera chinowanikwa pane yepamutemo Barker webhusaiti: “… Zororo rakauya chete mushure mekutarisa pasi pemubhedha wangu kanokwana kaviri ndokuzozvinyudza pasi pekuchengetedzwa kwemashiti angu (ayo asina chikara aigona kupinda), achinyatsovhara musoro wangu. Haana kumbodzika pasi pevhu. Hazvina kumboitika ".
Zvinyorwa zvaJD Barker
Pakati pedu (1995)
Nzira Dzakaipa (1997)
Mutambo Wenhare (1997)
Mumvuri Cove Saga
4MK Inonakidza Series
Tsoko yechina (2017)
Chechishanu Kufa (2018)
Mwana Wechitanhatu Akaipa (2019).
Novels dzakabatana naJames Patterson
Iwo mahombekombe kusvika kumhondi mhondi (2020)
dracula (co-munyori naDacre Stoker - 2018)
Ane Chinhu Chakatsemuka Panofanira Kuva Mwoyo Wake (2020)
Mutambo Wenhare (2021).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Tsoko yechina